WWE 2K22 Ongororo: Yakasiyana, Zvirinani, Kwete Yakakwana - Game Point - Bhodhi uye Vhidhiyo Mitambo
Yakatumirwa ne Andre Volkman | Kurume 20, 2022 | nhau, Miedzo yemitambo, pamusoro, Vhidhiyo mitambo
Chikamu 77%Chikamu 77%
Muyedzo, WWE 2K22 inoshanduka kuve rudzi rwekuyananisa nevateveri: Mushure menjodzi yakatangira WWE 2K20, chikamu chazvino hachingori mutsivi, asi kutangazve. Chero zvazvingava, vagadziri veVisual Concepts, pamwe chete neMuparidzi 2K, vari kuisa hwaro hwakasimba hwekuvandudza mune ramangwana. Iwe zvakare uchanakidzwa neWWE 2K22, asi pane nguva dzose tariro yeimwe budiriro.
Haufanire kurova musango: WWE 2019K2, iyo yakaburitswa muna Gumiguru 20, yaive kutadza kwehunyanzvi uye kwekutamba. Saka vakamira nemutsivi akananga kuti vape iyo yaimbove yakanaka wrestling nhevedzano chimiro chitsva. Motto: "Inorova zvakasiyana" - inonzwisiswawo se "Zvakasiyana". Vagadziri veVisual Concepts uye Publisher 2K vakavimbisa zvakawanda pachine nguva, vakamutsa poto yekushambadzira nemazvo - uye pakupedzisira vakakwanisa kuburitsa patsva pasi zvakanaka. Panzvimbo pokunyombwa seakatangira, vagadziri vacho vari kuwana rumbidzo yakawanda. WWE 2K22 yakanaka, inovaraidza, asi inewo utera.
WWE 2K22 ongororo: Zvakasiyana
NeWWE 2K22, mutambo mutsva wewrestling wakatangwa uyo uri nani uye nekutamba zviri nani kupfuura iyo yapfuura yakaderera poindi yenhevedzano. Iyo yekuwedzera nguva yekusimudzira uye yakagadziridzwa chimiro inonyatso kuratidzwa mumutambo: WWE 2K22 inotaridzika zvakanaka muzvikamu. Kunyanya, iyo inonyanya kuzivikanwa yevatambi vane mukurumbira vakacheka chimiro chinotaridzika - kubva kumeso kusvika kumuviri wemutsimba, vamwe vatambi vanotaridzika kunge photorealistic. Semuenzaniso The Dombo, Shawn Michaels, John Cena, Big E kana Kofi Kingston - chero munhu ane chinzvimbo uye zita munyika yeWWE anogona kuonekwa ikoko.
Iwo magiraidhi ane chikamu anotyisa - kunyanya mashura mabiko emeso. Mufananidzo: game point
Vagadziri vakaitawo zvimwe zvigadziriso maererano nekugadzikana. Iwo animations anonyanya kutsvedzerera uye anokonzeresa pakarepo mushure memirairo, vatambi vanoyangarara kana zvikanganiso zvakakomba zvegraphic chinhu chekare. Pachine tsikidzi uye glitches: dzimwe nguva kumira kwemafambiro emutsimba hakuna kunyatso, pano neapo varwi vanozvisundira mita kuburikidza nerin'i sekunge vakarova madziro asingaoneki kare, uye mamwe ma greats ewrestling mune animation. bvudzi dzimwe nguva haugone kubatsira asi kuseka. Masevha akamhanya pasina matambudziko uye isu hatina kunyora chero kukanganisa, asi zvinofanirwa kuitika, kunyangwe zvisiri kazhinji. Pakazere, handizvo kuti Visual Concepts haina kukwanisa kuzvigadzirisa nemapachi mashoma.
Iyo gameplay yakagadziridzwa zvakare zvakanyanya. Inotanga-hushamwari uye pakupedzisira yakagadziridzwa zvishoma kuti iite. Mutsimba unobudirira pamafambiro ayo anofema, kurwiswa nekukurumidza, kurwa kwemusango - zvese izvi zvinogona kuwanikwa zvakare muWWE 2K22. Vagadziri vanovimba nekuwirirana pakati pekufananidza uye arcade.
WWE 2K22 yakawedzera kuita-inorema, inoda kuve isingaite yakakomba mitambo simulation. Izvi zvakanaka kune gameplay. Iyo nhanho yakawedzerwa, kutsungirira zvinhu zvakabviswa uye panguva imwechete iyo mini-mitambo yakaderedzwa kunze. Swampy bhatani kupwanya izvozvi zvinongoitika mune mashoma mamiriro: kutiza pini, semuenzaniso, kana kuchengetedza kuendesa. Asi iwe unogara uchiona kuti mafambiro ari kuita sei panguva ino yekurwa, zvekuti hapasisina kudzvanyirira.
Ngano dzekare hadzifanirwe kushaikwa: Pano iyo "Miriyoni Dollar Man" Ted DiBiase. Mufananidzo: game point
Kunyanya zvinokatyamadza: Hauchada chidzidzo chinofinha kuti utange mubhizinesi rewrestling. Tora gamepad uende, ndiyo motto. Iwe uchiri kukwanisa kushandisa matekiniki: anopokana mafambiro anofanirwa kuverengerwa neakakodzera nguva bhatani bhatani, kana iwe uchitarisira kurwiswa, unogona kurwisa mudzvanyiriri wako nemazvo.
WWE 2K22 pane dzimwe nguva yakawanda yekurova 'em kumusoro pane yewrestling sim, asi icho chinhu chakanaka. Pachine matambudziko, zvisinei, nekuti vangangosvika zana nemakumi mashanu vatambi vane mafambiro akasarudzika anoda kuiswa mukati. Uye: Kana iwe uchida chaizvo kuita wrestling chaiyo muring, unofanirwa kujairana nemaseti ekufambisa. Chokwadi, iwe unogona kutumira mudzvanyiriri wako pasi nediki repertoire yekurwiswa, asi zvinova nani uye zvakanyanya kunakidza kana iwe ukaburitsa inotonhorera combos uye kuburitsa zvinofema moto zvechiito izvo WWE inozivikanwa nazvo. Kuzviisa pasi kunobata, chiito chepamusoro-soro, kupopotedzana kweupenzi nezvinhu, zvinhu zvakawanda zvinogoneka.
Pakazere, nhanho yekunetsa inosara kune veterans yeiyi nhevedzano, asi inoonekwa yakaderera pane yakatangira.
Nyaya Mode muWWE 2K22: Wrestling Comedy
Pamwoyo weWWE 2K22 ndiyo nzira yebasa, apo vatambi vanogadzira nyeredzi yavo vobva vakwikwidza kukudzwa nemazita. MuPerformance Center, mafaro anotanga seasina kana munhu, mushure mezvose aine chishuwo chekuve nyanzvi yeWWE chaiyo. Nzira yacho inenge ine mabhambu semaanimation ekumeso. Pane kazhinji nguva pano dzinoita kuti unyemwerere. Nhaurirano dzimwe nguva dzakapusa zvekuti unotoshaya chokwadi nevanyori. Zvimwe zvinotevedzana, kune rumwe rutivi, zvakaitwa zvakanaka - semuenzaniso, kana WWE superstars ikava chikamu chenyaya kakawanda, kupinda mukurwa kana kutanga mhirizhonga huru.
Mumatemberi emutsimba chaiwo mune mhepo yakawanda. Mharidzo inokodzera. Mufananidzo: game point
Usatarisire zvakawandisa kubva munyaya: Iri nezve nzira yekare kubva kune underdog kuenda kune shasha. Hapana chimwe uye hapana chidiki, asi nzira inonakidza kwazvo, nekuti mutambi anodzokororwa kukumbirwa kuita sarudzo: Ndiani wauri kutamba naye? Ndeupi mutambo waungade? Iwe unoda kuve mukomana akanaka kana dhongi remutsimba. Izvi zvinonyanya kunakidza nekuti panguva ino pane dzakawanda sarudzo dzekugadzirisa, unogona kugadzirisa hunhu hwako kusvika kune yekupedzisira ruzivo uye uchinje zvakare uye zvakare - uye nekuti mumhanyi anovandudzawo nhanho nhanho maererano nemutambo - nekupa mapoinzi.
Kana basa racho rikatanga rakanyanya kudzika kwauri, iwe unogona neimwe nzira kushandisa yakaringana pasuru pane mamwe mutambo modes. Ingo tamba mutambo unokurumidza mukuratidzira modhi, tamba nhangemutange kana kuita semaneja mukuru, hapana zvishuwo zvekutamba zvasara zvisina kuzadzikiswa. Kunyanya, kudzoka kwe "My GM", iyo yave iri pa hiatus kubvira 2007, ndeyekuwedzera kukuru. Chaizvoizvo, imhando ye "Sport Manager mwenje". Izvo ndezvekubata ruoko pamusoro pefranchise, kutaurirana zvibvumirano uye kutarisira vatambi uye zviitiko. Zvinonakidza uye zvinoita kuti ugare uchinakidzwa.
Rey Mysterio ndiye chivharo nyeredzi yemutambo. Basa rake ndiro rinotarisa "Showcase". Mufananidzo: game point
Uye zvakare, mamwe mbiru dzeWWE 2K22 ndiyo modhi "My Faction" kana "Showcase". Zvakafanana neFIFA Ultimate Team kana Madden's kadhi pack modhi, faction mode ndeyekuvaka timu inogara ichikura nekuimisa ichipokana nevamwe vatambi mumhete. Microtransactions chikamu chayo, haufanirwe kuashandisa, asi anoshambadzwa neimwe nzira inogumbura.
Iyo "Showcase" mode, kune rumwe rutivi, inozivikanwa, asi yakabudirira zvikuru. Chinonyanya kutariswa chiri pachivharo nyeredzi Rey Mysterio nebasa rake remakumi maviri remutsimba. Kune vateveri veiyo Franchise, uku kubatwa kwakanaka kunoita kuti iwe uwane nhoroondo yeiyo superstar. Izvi zvinonyanya kunakidza nekuti mitambo yemitambo uye kutevedzana chaiko kwemutsimba kunosanganiswa zvakare uye zvakare.
Nhamba yevatambi: single player/multiplayer
Zera: kubva ku16 makore (USK)
Genre: mutambo wemitambo
Subgenre: mutambo wewrestling
WWE 2K ishanduro nyowani yakabudirira yeinenge nhoroondo yemitambo mutambo wakateedzana. Vagadziri veVisual Concepts vakavandudza munzvimbo dzakawanda uye mune dzimwe nguva vakasimudza ruzivo rwemitambo kune imwe nhanho. Kupfuura zvese, kuwirirana pakati pematanho ekufananidza uye arcade-inorema gameplay inogutsa. Vanotangisa vanokurumidza kuwana mukana kumutambo, nyanzvi dzinopihwa mukana wakakwana wekuvandudza maitiro avo ekutamba nekurwa kana kuita izvo zvemashura mumhete nekutendeka sezvinobvira. Nekudaro, iyo gameplay haina kunyatso kuomarara seyakatangira.
Zvinogara zvichinakidza, izvo zvakare zvichikonzerwa nekuti vagadziri vacho vakakwenenzvera mutambo nehunyanzvi, zvine graphic uye nekutamba. Pamusoro pazvose, optics uye ruzha runotyisa munguva dzakawanda. Pane dzimwe nguva, zvisinei, WWE 2K22 inoratidzika kunge isingaite inosekesa kana varwi vachigomera zvakanyanya mukurwa.Pamusoro pazvo: ngano dzeWWE franchise dzinotaridzika chaizvo pane inotevera-gen consoles (Xbox Series X seyedzo system). Kana ngano dzekumaXNUMX kana makumi mapfumbamwe dzichipemberera kupinda kwadzo mumhete nemimhanzi yadzo yekupinda, moyo yevatambi venguva refu inosvetuka. Chero zvazvingava, mharidzo yacho ndeyechokwadi, kuitira kuti iwe unofarira kutanga mutambo nguva nenguva: Pane zvinopfuura zvakakwana kuita nemamodhi ose emutambo uye mupepeti wekuwedzera.
WWE 2K22 inonakidza uye yakasiyana-siyana, iri nyore kudzidza uye yakaoma kubata (zvakanaka, yakaderedzwa "yakaoma"), yakasimba zvehunyanzvi zvakare, uye yakakura. Zvakadaro, vanogadzira vanogadzira imwe kana imwe blunder iyo dzimwe nguva inopaza nekuyerera kwakanaka kwemutambo. WWE 2K22 inogona kutsanangurwa seyakabudirira yakazara package, umo zvisiri zvese zvinoshanda nemazvo, asi ingangoita yakakodzera WWE zita.
Mushure menjodzi yevakatangira, vagadziri uye vaparidzi vanogona kuvaka pamusoro payo - uye kuramba vachishanda pakuvandudza: munguva pfupi yeWWE 2K22 uye munguva refu yemutambo wakateedzana. Tichifunga nezvekutangazve kwaunzwa, vateveri havachafanirwa kutya chikamu chinotevera.
WWE 2K22 Deluxe - USK & PEGI - [Playstation 4] * tenga
mhedziso WWE 2K22 idombo-yakasimba chiito-mitambo mutambo unova kutanga kwakanaka kune yakagadziridzwa wrestling franchise. Inotonhorera mafambiro, yakanaka magiraidhi uye akasiyana emitambo modhi anoumba chimiro chitsva: vanogadzira Visual Concepts uye Muparidzi 2K vanogona kuvaka pane izvi mune ramangwana.
Kare New rezinesi fair muGermany: Kekutanga mumatsutso
Inotevera Influencer komedhi: "Hänno munzira" naKurt Krömer
[Sweepstakes] Winda iyo Don Winslow mushonga unonakidza "The Cartel"
Tiny Tina's Wonderlands: New trailer inoratidza gomba risingaperi
Dune Spice Wars: Chaiyo-nguva zano mutambo kubva kuvagadziri veNorthgard
Nekuda kwekuvandudza, Nintendo Shandura ine chimiro chave nenguva yakareba